Saynisyahanada ayaa ka digaya fayras cusub oo si dhakhso u faafaya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Saynisyahanada ayaa ka digaya fayras cusub oo si dhakhso u faafaya
Saynisyahanada ayaa ka digaya fayras cusub oo si dhakhso u faafaya
Fayras cusub oo hargab ah oo laga helay doofaarka Shiinaha ayaa noqday mid ku faafay bini aadamka waxaana loo baahan yahay in si dhow loola socdo hadii ay noqoto “fayras faafa”, daraasad cusub ayaa lagu ogaadey.
Koox baarayaal Shiinees ah ayaa eegay fayraska hargabka ee laga helay doofaarka laga soo bilaabo 2011 ilaa 2018 waxayna heleen “G4” nooc ah H1N1 oo leh “dhammaan astaamaha astaamaha ee fayras musiibo ah”, sida lagu sheegay warqadda, oo lagu daabacay joornaalka Mareykanka. , Talaabooyinka Akadeemiyada Qaranka ee Sayniska (PNAS).
Shaqaalaha ka shaqeeya beeraha doofaarka waxay muujiyeen heerar sare oo ah fayraska dhiigooda, qorayaashu waxay yiraahdeen, iyagoo raaciyay in “korjoogteyn dhow ay ku yeeshaan dadka aadanaha, gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeeya waaxda doofaarka, in si deg deg ah loo hirgaliyo.
“Doofaarku waa martigeliyayaal dhexdhexaad u ah jiilka fayruuska hargabka faafa. Sidaa darteed, la-habeynta hababka fayraska hargabka doofaarka waa tallaabo muhiim ah oo loogu talagalay ka hortagga hargabka xiga ee faafa,” daraasadda ayaa lagu yiri.
Daraasadda dib-loo-eegay ayaa waxaa qoray aqoonyahanno ka tirsan Jaamacadda Beeraha Shiinaha, Jaamacadda Beeraha Shandong, Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Shiinaha, Akademiga Cilmiga Shiinaha, iyo Jaamacadda Nottingham.
Daraasaddu waxay iftiimineysaa halista fayraska uga gudbaya caqabad ku saabsan noocyada geedaha dadka, gaar ahaan meelaha dadku ku badan yahay halkaasoo malaayiin ay ku nool yihiin meel u dhow beeraha, xarumaha taranka, suuqyada gawraca iyo suuqyada qoyan.
Buuggan cusub ee loo yaqaan ‘coronavirus’ ee sababay masiibada COVID-19 ayaa la rumeysan yahay inuu ka soo jeedo fiidmeerta nooca loo yaqaan ‘Horsehoe’ ee koonfur-galbeed Shiinaha, waxaana ku faafi kara aadanaha iyadoo loo marayo suuqa kalluunka badda ee Wuhan, halkaas oo markii ugu horreysay laga helay fayraska.
Daraasadda PNAS ayaa sheegtay in doofaarradu loo tixgeliyo inay muhiim u yihiin “isku-dhafka maraakiibta” ee jiilka fayruusyada hargabka faafa waxayna ku baaqeen “la-socosho nidaamsan” dhibaatada.
Shiinaha ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah dillaaca avian H1N1 sanadkii 2009, iyada oo xaddideysa duullimaadyada soo galaya ee ka imanaya waddamada dhibaatadu ka dhacday oo kumanaan kun oo qof gelisay karantiil.
Fayraska cusub ee lagu cadeeyay daraasadda ayaa ah dib-u-kala-soocidda kaladuwanaanshaha H1N1 ee 2009 iyo mar dhif ah oo laga helay doofaarka.
Laakiin in kasta oo ay awood u leedahay in ay ku fidiso bini’aadamka, ma jirto halis khatar ah oo ah in masiibo cusub dhacdo, ayuu yidhi Carl Bergstrom, oo cilmiga bayoolajiga ka dhiga Jaamacadda Washington.
“Ma jiraan wax caddeyn ah oo ah in G4 uu ku faafayo aadanaha, inkasta oo shan sano uu si baahsan u soo muuqanayay,” ayuu ku yiri Twitterka kadib daabacaadda warqadda. Taasi waa macnaha guud ee maskaxda lagu hayo. ”
Previous articleFaysal oo u jawaabey go aankii wakiilada somaliland
Al-Shabaab oo Rasaas ku furay doon!!
Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay Xayiraadii lagu sameeyay Garoonka...